Daawo Sodhaweyn loosamayey Suldaan xeydar suldan suufi suldan beesha tunni | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo Sodhaweyn loosamayey Suldaan xeydar suldan suufi suldan beesha tunni
Daawo Sodhaweyn loosamayey Suldaan xeydar suldan suufi suldan beesha tunni
waxa soo dhaweyn aad u sareysa loogu sameyay Baydhawo Suldaan xeydar suldan suufi suldan munye Suldaanka Beelaha Digil io Mirifle Gaar ahaan suldanka beesha tunni aya si Wayne loogu soo dhaweyay magalada beydhabo Ee Casimada Gumel gaark Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhalinyarada Aqoonyahanada Deegaanada baraaawe aya waxey taagero Waxey ugu sameyay MMQ waxeyna ku amaaneen soo dhaweynta Diiran loogu sameyay.
Gudomiye ku xigeenka Dhalinyarada Aqoonyhanada Deegaanada baraawe daaha maxamed aweys ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay Soodhaweenta loo sameeyay Suldaanka.
Sidoo kale waxaa ka hadlay Soo dhaweenta Suldaanka Gudomiyeha Dhalanyarada Aqoonyahanada Deegaanada Baraawe Mudane Maxamed sheekh Aadam (Xaaji) Wuxuu aad ugu amaanay dadaalka dadkii ka qeebgalay Soo dhaweenta Suldaanka.
Ugu danben dhalinyarada Aqoonyahanada Deegaankeenada baraawe aya bilan qaadayay suldaanka in ay ku so dhaweyndoon Degmada baraawe
Previous articleDF ma ka go’an tahay dagaalka Al-Shabaab, maxaase ka jira geerida Cali Dheere?
Next articleShirkan Xamar ka socdaa waa kii Labaad ee maaha “Markii ugu Horreysay”